Ixabiso leMigodi leNkuni linjani?
Ininzi yale mali yeGolfer Now ivela kwiinkxaso
Ixabiso likaTiger Woods akulona lula ukuzimisela, kuba, ngokukodwa, akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo ukuba ingakanani imali engenayo engaphezu kweminyaka, kwaye akukho mntu (ngaphandle kweTiger, i-akhawunti yakhe kunye nokuba ngabagwebi bakhe) bayazi zonke iindleko zakhe.
Oko kwathiwa, kukho ukuqikelela kweNgxowa-mali ye-Woods ukususela ekuguquleleni. Ngokutsho kweGolf Digest, i-Woods, ekupheleni kuka-2014, izuze i-$ 1.37 yezigidigidi . Uqikelelo lwemali ye- Woods yokufumana umvuzo luquka ukuzuza kwegalufu, kunye neengeniso ezingenakudlula ezifana nezenzo zokuvuma, ukuphuma kweenkampani, iimali zokufumana ilayisensi kunye njalo.
Akubandakanyi nayiphi na ingeniso yokufumana imali. Ukuba i-Woods ifake imali yakhe kwiimpahla okanye ezinye izithuthi zokutshala imali (kwaye ngokuqinisekileyo uye watyala imali encinci - enye yezinto ezizityebi abantu abazenzayo ngemali yabo), ngoko i-$ 1.37 yezigidigidi iphakamileyo (okanye iphantsi, ukuba akazange azitye ngokuhlakanipha).
Imali eninzi kunye nexabiso elifanelekileyo
Amanani angentla angena kwi-Income engenayo ye-Woods, kungekhona inzuzo yakhe. I-Woods isebenzisa imali eninzi, kwakhona: Indlu yezigidi ezingama-40 apha, i -yacht yezigidi ezingama-20 apho. Kukho ininzi yentlawulo ukuhlawula kubaphathi abathintelayo, kunye neendleko zemihla ngemihla kunye neendleko zokuhamba.
I-Woods nayo inabantu abaninzi ukuhlawula: Abagcini-mali kunye namagqwetha; abaphathi nabaphathi; (mhlawumbi) amantombazana, abalimi kunye nabagadi abafanayo; kunye nabanye abasebenzi baseTiger Woods Inc.
Ngexesha lokuqalisa ukuqhawula umtshato wakhe kumfazi wokuqala owayengumfazi u-Elin Nordegren, kwakukho amahemuhemu amaninzi apho ama-Woods aya kufuneka ahlawule i-Nordegren eyizigidi ezingama-500, i-$ 750 yezigidi, ukuhlaliswa komtshato.
Ukufakazela ukuba intlawulo ye-Woods yayingama-$ 1.5 billion okanye ngaphezulu. Lezo ngxelo zasendle zazinjalo, ngokuqinisekileyo, zazingekho. Nangona iholo likaPols liye lalingama-dollar ayi-biliyoni, inzuzo yakhe ingaphantsi kwesigidi ngenxa yazo zonke iindleko-kwaye ukuqhawula umtshato kunye neNordegren kwakukude kwi-$ 100 yezigidi.
Iingxelo ezilungileyo kakhulu namhlanje
Uqikelelo olulungileyo lwexabiso likaTiger Woods esilubonile lisuka kumagazini weForbes, olubandakanya i-Woods kwi-list ye-2015 ye-American Richest Entrepreneurs Under 40. Ngokwe-Forbes, u-Woods umthamo ngowama-dollar ayi-700. Oko akusiyo inguquko ye-chump, kodwa ayikho i-$ 1.5 billion, mhlawumbi-kwaye isenza i-Woods ingumdlali ocebile kakhulu kwihlabathi.
Ngaphambili ngo-2015, i-Treasury-X - "ingqiqo ye-ultra-high-value (UHNW)" kunye ne-prospecting firm "- i-Woods 'net worth in $ 590 yezigidi, kwaye emva koko ngo-2009, u-Forbes uqikelele ukuba u-Woods ulunge kwi-$ 600 yezigidi. Ukuqikelela kwangaphambili kwakukho ngaphambi kokuba uThomas noNordegren bagqibe umtshato wabo wokuqhawula umtshato .
Ngokubhekiselele kwiBhanti, "Iingxelo zeForbes zithi i-sponsorship manje ixanduva lobuninzi bemali engenayo ye-Woods kwaye yamfumana i-$ 45 yezigidi kwiinyanga ezili-12 eziphelile ngo-Juni 2016. Ukuxabisa kwayo kubemi kwi-740 yezigidi ukuya ngo-Meyi 2017, ngokutsho Iimpawu ezifanelekileyo.
Ukusebenza koombane Inkcazo
Ukubuyiselwa komqhubi weSrixon Z 355